ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် | Save Burma
Posts Tagged ‘ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်’
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၁၄-၁၁-၂ဝ၁ဝ လူထုမိန့်ခွန်း(စာသား)
စာသားအနေဖြင့် ဆိုလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောသမျှ အားလုံးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိလာနိုင်သောကြောင့် ပိုပြီး မှတ်မိလွယ်မည် ဖြစ်သည်။ ထပ်ဆင့်၍လည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ချိပေးပါ။
ရှာဖွေ ပေးပို့သော ကီးဗွေလိန်းအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Download PDF – DASSK 14-11-2010
Posted in မှတ်သားစရာ
Tagged with လူထုမိန့်ခွန်း, ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေအပေါ် ဒေါ်စု သဘောထားများ အနှစ်ချုပ်
၂၅-၈-၂ဝ၁ဝ နေ့က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရုံးခန်းတွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ဦးဥာဏ်ဝင်းမှ ပြောပြသည့် လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သဘောထား အနှစ်ချုပ်
ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ကို မဲပေးချင်သည့် လူထုအနေဖြင့် NLD မရှိချိန်မှာ မဲမပေးဖို့သာရှိ။
အသံလွှင့် သတင်းဌာန၊ သတင်းစာ၊ မီဒီယာများမှာ တွေ့မြင် ကြားသိနေရသည့် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ လှည့်ဖျားမှု၊ ပြည်သူလူထုမှ မသိ နားမလည်ခြင်းကို အခွင့်ကောင်းယူ အမြတ်ထုတ်မှုမျိုးကို လက်မခံနိုင်။
တိုင်းပြည် စီးပွားရေး အခြေအနေ မကောင်းလို့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့ အခက်အခဲ ရှိနေကြောင်းကို (ဘီဘီစီ -မြန်မာ) မှ ကြားသိရ၍ စိတ်မကောင်းဖြစ်။
ဘီဘီစီ၊ ဗီအိုအေ အစရှိ အသံလွှင့် သတင်းဌာနအားလုံးသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် ပြည်သူလူထု အားလုံးအတွက် နားထောင်နိုင်ဖို့ အားကိုးရ။
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်နေ့ကို အချိန်ကပ်၍ ကြေညာခြင်းသည် မတရား၊ ပြည်သူလူထုကို မလေးစားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်။
Freedom of expression နဲ့ freedom of information ၊ သတင်းရယူခွင့်၊ သတင်းထုတ်ပြန်ခွင့်၊ မိမိဆန္ဒကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့် စသည်များ မပါရှိပဲ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ မဖြစ်နိုင်။
၂ဝဝ၈ အခြေခံဥပဒေအရ နောင်ဖြစ်လာမည့် အစိုးရကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ထိန်းကျောင်း ကြပ်မတ်နိုင်ခြင်း မရှိ။ အဆိုပါ အစိုးရမျိုးသည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ တည့်မတ်နိုင်သော အစိုးရမျိုး မဖြစ်၊ ထိုအစိုးရမျိုးသည် သမတ လွှမ်းမိုးသော အစိုးရမျိုး ဖြစ်မည် စသည်တို့ကို ပြည်သူလူထုက လေ့လာဖို့ သင့်။
၂ဝဝ၈ အခြေခံဥပဒေ ပြဌာန်းချက်များမှ တရားမျှတမှု မရှိသောအချက်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဥပဒေများမှ တရားမျှတမှု မရှိသော အချက်များကို ပြည်သူလူထု သိရှိအောင် ဥပဒေ ပညာပေးများ လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်။
မဲဆန္ဒရှင်တဦးက ထိုသို့သော တရားမျှတမှု မရှိသည့် အချက်များကို မသိပဲ မဲပေးခဲ့လျှင် အဓိပ္ပာယ် မရှိ။
“ဥပဒေ ဆိုတာ တရားမျှတ ရမယ်။ လူတွေအားလုံးက (ဥပဒေ ထုတ်သူတွေ၊ ထိန်းပေးရတဲ့ သူတွေကအစ အားလုံး) တရားမျှတတဲ့ ဥပဒေကို လိုက်နာကြရမယ်။ အခုဟာက ဥပဒေ ကိုယ်တိုင်က တရားမျှတမှု မရှိဘူး။ ဒါ့အပြင် ဥပဒေကို ထုတ်သူ၊ ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရသူတွေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဥပဒေကို မလိုက်နာဘူး။ ဒါဟာ မင်းမဲ့စရိုက် (Anarchy) ဖြစ်နေတယ်”(ဤသဘောကို ဆောင်သော စကားလုံးများကို ပြင်လည်ပြင်ဆင် ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။)
မြန်မာပြည်သူတို့အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကို စိတ်ဝင်စားသင့်၊ ပြည်သူလူထုက မဲဆန္ဒရှင်များ ဖြစ်သည့်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများက တရားမျှတမှု မရှိလျှင် ယခုလက်ရှိပုံစံအတိုင်း ငြိမ်ခံမနေပဲ ရဲစခန်းသို့ တိုင်တန်းနိုင်။
မဲရုံများကို စောင့်ကြည့်ပြီး မှန်ကန်မှု ရှိ-မရှိ စောင့်ကြည့် ဖော်ထုတ်ခြင်း (Monitor) ၏ အဓိပ္ပာယ်နှင့် လုပ်ရပ်ကို လူထုအနေဖြင့် အရင်ဦးစွာ သဘောပေါက် နားလည်နေအောင် ပြောဆိုပေးကြရန်၊ လူထုက ထိုသို့သိရှိလာမှသာ လိုအပ်သလို အရေးယူ ဆောင်ရွက် တိုင်တန်းနိုင်မှာဖြစ်။ တနည်းအားဖြင့် လူထုကို သိရှိအောင် ပညာပေးခြင်း (Public awareness) လုပ်ဖို့ လိုအပ်။
အထက်ပါ အနှစ်ချုပ်မှာ Burma Today တွင် ဖော်ပြထားသော အင်တာဗျူးမှ စကားပြောများကို အနှစ်ချုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ(၂၆)ရက်နေ့က တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ အမှု၂မှုကို တရားရုံးချုပ်မှ ယနေ့ လက်မခံပဲ ပယ်ချ…
ဒီမိုဝေယံ မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
ပြီးခဲတဲ့ဧပြီလ ၂၉ရက်နေ့က ဗဟိုတရားရုံးချုပ်သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းမှတ်ပုံမတင်ရင် အလိုလျှောက် ပျက်ပြယ်မည်ဆိုသည့် ဥပဒေအား တားဝရမ်းထုတ်ပေးဖို့ နဲ့၁၉၉၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ခံ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၂၆ဦးမှလည်း ဥပဒေအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း ကြေငြာပေးဖို့နဲ့ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း လွှတ်တော်ခေါ်ယူ ပေးဖို့ တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ အမှု၂မှုကို ယနေ့တရားရုံးချုပ်မှ လက်မခံပဲ ပယ်ချလိုက်ကြောင်း ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုသွားပါတယ်။
ဒီနေ့ညနေ ၄နာရီလောက်က ဗဟိုတရားရုံးချုပ်က ညွန်ကြားရေးမှုးက ဖုန်းဆက်ခေါ်လို့ သွားတွေ့ပါတယ်။ ပြီးခဲတဲ့ဧပြီလ ၂၉ရက်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၂၆ဦးတင်ခဲ့တဲ့ အမှု ၂မှုကို လက်မခံဘူး ပယ်ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဘာကြောင့်လို့လဲ ဆိုတော့ ဒါတွေဟာ ဥပဒေကြောင်းအရ ပယ်ဖျက်ပြီးလို့ လက်မခံနိုင်ဘူး ပယ်ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တွေရဲ့ ရပ်တည်မှုနဲ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ ၉၁(ခ)အရ အဲ့ဒီရလာဒ်တွေကို ပယ်ဖျက်ပြီး ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင် ဥပဒေပုဒ်မ (၂၅)အရ သတ်မှတ်ရက် ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း ထပ်မံမှတ်ပုံမတင်ရင် အလိုလျှောက် ပျက်ပြယ်တယ်ဆိုတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက် အဲဒါတွေကို ညွှန်ပြပြီးတော့ ကန့်ကွက်တာပါ။ သူတို့ ဖုန်းဆက်ခေါ်လို့ အန်ကယ်တို့ သွားတွေ့တာပါဟု ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုသွားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၂၉ရက်နေ့က ဗဟိုတရားရုံးချုပ်သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ၁၉၉၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ခံ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၂၆ဦးမှလည်း ဥပဒေအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက အမှု၂ခုကို လက်မှတ်ထိုးပြီး တင်ခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ပါတီမှတ်ပုံတင် ပြန်လည်မတင်ရန် အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင် ဥပဒေအရ မနက်ဖြန်မှာ ရက်ပေါင်း ၆၀ပြည့်ပါမယ်။
Posted in ဥပဒေရေးရာ, Uncategorized
Tagged with ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်, ရွေးကောက်ပွဲ
ဒေါ်စု အယူခံပြင်ဆင်မှု လျှောက်လဲချက် ပယ်ချခံရ
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပေါ် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချမှတ်ထားတဲ့အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေတွေဘက်က တင်သွင်းခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှု လျှောက်ထားချက်ကို ဒီကနေ့မှာ ဗဟိုတရားရုံးက ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် အခုလို ပယ်ချခဲ့တာလဲဆိုတာကို ဗဟိုတရားရုံးက ပြောဆိုခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က ပြစ်မှုတစုံတရာ ကျူးလွန်မှုမရှိကြောင်းနဲ့ ဒီအမှုအတွက် အထူး အယူခံတင်သွင်းဖို့ ရှိတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပြပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အယူခံပြင်ဆင်ချက် ပယ်ချမှု နိုင်ငံတကာ ပြစ်တင်ဝေဖန်
ကိုကျော်ကျော်သိန်း – နားဆင်ရန် (MP3)
ကိုကျော်ကျော်သိန်း – အစီအစဉ်ကိုရယူရန် (MP3)
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူ့အပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ ထောင်ဒဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြင်ဆင်ချက် လျှောက်ထားတင်သွင်းတာကို ဗဟိုတရားရုံးက ပယ်ချလိုက်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာက စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဝေဖန် ပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒီလို နိုင်ငံတကာက ထုံးစံအတိုင်း ကြေညာချက်တွေထုတ်ပြီး ဝေဖန် ပြောဆိုတာ လောက်ကိုတော့ မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက ဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ တုံ့ပြန်ဝေဖန်တာလည်း ထွက်လာပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားတဲ့အပေါ် ပြင်ဆင်ချက်လျှောက်ထားတာကို ဗဟိုတရားရုံးက ပယ်ချ လိုက်တဲ့အတွက် ဝေဖန် ပြစ်တင်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာ ဗြိတိန်နဲ့ ကနေဒါတို့က အပြင်းထန်ဆုံးလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဂေါ်ဒွန်ဘရောင်းက ဒီလိုပယ်ချလိုက်တဲ့အတွက် မိမိအနေနဲ့ ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်ပြီး ၀မ်းနည်း စိတ်ပျက်ရတယ်လို့ ကြေညာချက် တစောင် ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့တာရော၊ အယူခံတင်သွင်းတာကို အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ ရောဟာ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းစံထားတွေနဲ့ မကိုက်ညီသလို တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို လုံးဝ လျစ်လျူရှု ပစ်ပယ်လိုက်တာပဲလို့ ကနေဒါနိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး လောရန့်စ် ကန်နွန် (Lawrence Cannon) က ပြောပါတယ်။ အခုလို ပယ်ချလိုက်တာကို ကနေဒါနိုင်ငံအနေနဲ့ အလွန်အမင်း စိတ်ပျက်ရတယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။
အကြီးအကျယ် စိတ်ပျက်ရတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ နောက်နိုင်ငံတခုကတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတူတူ အာဆီယံ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတခုဖြစ်တဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံပါ။
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းကတော့ စိတ်ပျက်ရကြောင်းလောက်ကိုပဲ စာကြောင်းသုံးကြောင်းပါ ထုတ်ပြန်ချက်တခုနဲ့ သူ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာဟာ အခုလောက်ပြောဆိုရုံနဲ့ လုံလောက်မှုမရှိဘဲ ပိုပြီး လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုတယ်လို့ ပြန်ပြီး ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်တာကတော့ ဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက်၊ မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ Burma Campaign UK ရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး Mark Farmaner ပါ။
“ဒါပေမဲ့လည်း အခုလိုမျိုး ခပ်ပျော့ပျော့ အားနည်းတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေ ထုတ်ပြန်ခြင်းအားဖြင့် လက်ရှိအချိန်မှာတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ပြဿနာရဲ့ တစိတ်တပိုင်း ဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့က မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ဆက်သာလုပ်၊ လူတွေကို ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေကို တိုက်ခိုက်၊ အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည်စေမယ့် အခြေခံဥပဒေကိုကိုင်ပြီး အတုအယောင် ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ် ဆိုပြီး ပြောသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဘန်ကီမွန်းကတော့ သူ စိတ်ပျက်တယ်လို့ ပြောတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ကြားမှာကတော့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို ဆက်သာလုပ်၊ ငါတို့ ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ ဆိုတာပါပဲ။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အယူခံပြင်ဆင်ချက်ကို ပယ်ချတဲ့အပေါ် ဝေဖန်ပြောဆိုကြတာနဲ့ တဆက်ထဲမှာပဲ အကျဉ်းချထားတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ ဒီနှစ်အတွင်း ကျင်းပမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေရဲ့ တရားဝင်မှုကို ဆက်စပ် ပြောဆိုတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။
တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ထဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မပါနိုင်အောင် ဘေးဖယ်ထုတ်ထားပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂,၁၀၀ ကျော်ကို ဆက်ပြီး ဖမ်းထားတာနဲ့အမျှ စစ်အစိုးရက ကျင်းပတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာ နိုင်ငံတကာရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုကို မရသလို တရားဝင်မှုလည်း ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဂေါ်ဒွန်ဘရောင်းက ပြောပါတယ်။
ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ အပါအ၀င် နိုင်ငံသားအားလုံးကို မြန်မာ စစ်အစိုးရက လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပါဝင်ခွင့်ပေးမှသာ ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာ ယုံကြည်ဖွယ်ရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကနေဒါ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကိုလည်း စင်္ကာပူနဲ့ ကနေဒါတို့က တောင်းဆိုထားပါသေးတယ်။
မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက နိုင်ငံတကာကပြောတာကို နားထောင်ပြီး နည်းနည်းလိုက်လုပ်တဲ့အချိန်ကတော့ နိုင်ငံတကာကနေ ပြင်းထန်တဲ့ဖိအား ကျလာတော့မယ်လို့ စိုးရိမ်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်တယ်လို့ Burma Campaign UK က Mark Farmaner က ပြောပါတယ်။
“တကယ်ပဲ ဖိအားကျလာတော့မယ်ဆိုတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ သူတို့လုပ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့ လုပ်ကို မလုပ်ပါဘူး။ ASEAN အဖွဲ့က တိုးတိုးတိတ်တိတ် ၀န်ခံထားတာရှိပါတယ်၊ သူတို့လုပ်ခဲ့တာ မြန်မာ့အရေးမှာ လုံးဝ မအောင်မြင်ဘူး၊ သူတို့ရဲ့ ပျော့ပြောင်းညင်သာတဲ့ ချဉ်းကပ်မှုက အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ ၀န်ခံထားပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် တွေ အများအပြား မြန်မာနိုင်ငံကို ၄၁ ကြိမ်သွားခဲ့ဖူးပါပြီ၊ အပြောင်းအလဲလေးတခုတောင် မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ တခုခုလုပ်တဲ့အချိန်ကတော့ နိုင်ငံတကာ ဖိအားအောက်မှာ ရောက်နေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။”
ဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့က ညွှန်ကြားရေးမှူး Mark Farmaner ပြောခဲ့တာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေကတော့ ဥပဒေလမ်းကြောင်း ဆုံးတဲ့တိုင်အောင် လုပ်စရာရှိတာတွေ ကို ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး နောက်တဆင့် အထူး အယူခံတင်မယ်လို့ ဗွီအိုအေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဗိူလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေထံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပေးစာ အပြည့်အစုံ
Aung San Suu Kyi’s letter to Than Shwe
Senior Gen. Than Shwe
Chairman State Peace and Development Council
Dated: 11 November 2009
Subject: Follow-up letter for lifting sanctions
1. I am very much obliged to express my grateful thanks to the State Peace and Development Council for providing arrangements making possibleameeting between political organizations and US diplomats, led by Assistant Secretary of State Mr. Kurt Campbell, during their recent visit to Burma.
2. Similarly I would like to express my grateful thanks, following my letter stipulating my desire to cooperate with the State Peace and Development Council on the lifting of sanctions, for providing me with proper arrangements pertaining to my fact finding on sanctions imposed on Burma.
3. I hope I can cooperate with the State Peace and Development Council in activities that can benefit the State.
4. I want to invite all National League for Democracy Central Executive Committee members to my home to discuss greater efficiency in our party activities. I would further like to pay homage to senior party leaders, Chairman U Aung Shwe, Secretary U Lwin and CEC member U Lun Tin, at their respective homes as they are confined to their homes due to failing health. As such, I would like to ask permission for the necessary arrangements to be made for allowing the convening ofaCEC meeting at my home to be attended by all CEC members.
5. After meeting with all CEC members, I would like to say that I want to cooperate more with the State Peace and Development Council in activities beneficial to the State.
6. For these activities that can benefit the State, and relating to areas in which I can cooperate with the State Peace and Development Council, I humbly request permission for myself to meet with the Senior General.
Tagged with ဗိူလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ, ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ကိုယ့်ဘက်က ထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းကြောင့် လုပ်ငန်းဆိုင်းငံ့မှာ၊ နှောင့်နှေးမှာကို မလိုလားဟု ရှေ့နေများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ဒေါ်စုပြောဆို။…။
…..ယနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရှေ့နေဦးဥာဏ်ဝင်း၊ ဒေါ်ခင်ဋ္ဌေးကြွယ်တို့ (၂)ဦး နေ့လည်(၁)နာရီမှ (၂)နာရီကျော်အထိ (၁)နာရီကျော်ကြာတွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေဆုံခွင့်ရသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ရှေ့နေကြီးဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။…..
” ဒီကနေ့ နေ့လည်(၁)နာရီက အန်ကယ်နဲ့ ဒေါ်ခင်ဋ္ဌေးကြွယ်တို့နှစ်ဦး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ (၁)နာရီကျော်ကြာ တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ (၄)ဦးလုံးတွေ့ဖို့ စီစဉ်ထားပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာက (၂)ဦးပဲ တွေ့ခွင့်ပေးပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေတွေက ဆရာဦးကြည်ဝင်းရယ်၊ အန်ကယ်ရယ်ပါ။ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း၊ ဒေါ်ဝင်းမမ တို့အတွက် ရှေ့နေကဦးလှမျိုးမြင့်နဲ့ ဒေါ်ခင်ဋ္ဌေးကြွယ်ပါ။ အဲ့ဒီတော့ အန်ကယ်တို့ အချင်းချင်းညှိပြီးတော့ အန်ကယ်နဲ့ ဒေါ်ခင်ဋ္ဌေးကြွယ် တို့ပဲတွေ့ဖို့ စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကို အယူခံဝင်ဖို့ ကိစ္စဆွေးနွေး ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
……နောက်တခုကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်ရှိအခြေအနေတွေ ဖြစ်တဲ့ Sanction ကိစ္စအတွက် ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့ ကိစ္စ၊ နောက်သံတမန်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့ကိစ္စတွေကို အသေးစိတ် ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေကို လောလောဆယ် သတင်း မထုတ်ပြန်ခိုင်းပါဘူး ….. သိသင့်သိထိုက်တဲ့ သူတွေကို သိအောင်လို့ ပြောပြတာဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ဘက်က စည်းစောင့် ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုယ့်ဘက်က ထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းကြောင့် လုပ်ငန်းဆိုင်းငံ့မှာ နှောင့်နှေးမှာကို မလိုလားကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။….
…..အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ အဖွဲ့ချုပ်ညီညွတ်ရေးအတွက် လိုအပ်တာတွေ ဆောင်ရွက်ရမဲ့ သဘောထားတွေ ပြောပြပါတယ်။ နောက် အဖွဲ့ချုပ် CEC နဲ့တွေ့ဖို့ တောင်းဆိုထားကြောင်း ၊ တွေ့ဖို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောဆိုပါတယ် …..ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပါတယ်။ Alert လည်းဖြစ်ပါတယ်……ဟုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေလည်းဖြစ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောဆိုပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်နေ့၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ချမှတ်လိုက်ပြီး နအဖဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ၏ အမိန့်ဖြင့် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ၁ နှစ်ခွဲဖြင့် ဆိုင်းငံ့ပြစ် ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ အဓိက တရားခံ ဂျွန်ယက်တောကိုမူ အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၇နှစ်စီရင်ချက် ချမှတ်ခဲ့ပြီးမှ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် အမတ်တဦးဖြစ်တဲ့ မစ္စတာဂျင်မ်ဝက်ဘ် ရောက်ရှိချိန်၌ ပြန်လည် လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ် ။ တိုင်းတရားရုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှုအယူခံကို လက်ခံခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာလ (၂)ရက်နေ့က အယူခံကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေများမှ ဗဟိုတရားရုံးမှာ ဆက်လက်အယူခံ တင်ရန်အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။..။
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Friday, October 16, 2009
Myanmar marks anniversary of killing of founding father - Minneapolis Star Tribune July 19, 2019
Facebook Keeps Failing in Myanmar - Foreign Policy June 21, 2019
Who Is A$AP Rocky? Kim Kardashian Thanks Donald Trump, Jared Kushner for Help in Getting Rapper Released from Swedish Jail July 19, 2019
'He Must Have HadaGuardian Angel': Baby Boy Plunges From 5th-floor Window, Survives After Dramatic Crash Into Clothes Line July 19, 2019